Gudoomiyihii dagmada Buulo-burte oo xilkii laga qaaday iyo Khilaaf xoogan oo kadhashay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 8th October 2019 077
Wareegto ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Maamul Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay xilkii loogaga qaaday guddoomiyihii degmada Buulo-burte iyo ka qaaday iyo duqii degmadaas.
Guddoomiyihii degmada Buulo-Burde C/Casiis C/llaahi Cabdi (Duuroow) iyo duqii degmadaas Maxamed Fiidowe Cawaale ayaa xilalkii ay hayeen laga qaaday iyadoo guddoomiye ku meel gaar ah loogu magacaabay Guddoomiye kuxigeenka Maaliyadda Liibaan Cabdi Burisoow ee degmada Buulo-burte.
Wareegtada xilka loogaga qaaday guddoomiyihii iyo duqii magaalada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan ayaa lagu sheegay in ay salka ku hayso isqabqabsi dhinaca maamulka ah balse lama cadeyn isqabqabsigaa nooca uu yahay.
Hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in xil ka qaadista ay salka kuhayso diidmo ay madaxda maamulka Buuloburte ay diideen in laga dhiso golaha deegaanka degmadaas iyagoo sheegay in marka hore la dhiso golaha deegaanka degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Xilka ka qaadista maamulka degmada Buulo-burte ayaa timid maalmo kadib markii Maamulka Hirshabelle uu xilka ka qaaday guddoomiyihii degmada Beledweyne.
Jubbaland oo war cusub ka soo saartay caleema saarka Axmed Madoobe.
Update: Xildhibaanada Galmudug oo Jawaahir Axmed Cilmi u doortay Kursiga Lixaad ee Xubnaha Aqalka Sare kadib Tartan adag